Ma rabtaa inaad ka saarto taraafikada gudaha ka timid Google Analytics? Khabiirka warfaafinta ayaa sheegaaya sida
Suuq geynta internetka, helitaanka joogtada ah ee booqdayaasha waa ujeedada wax-iibsade kasta. Si kastaba ha noqotee, cid kasta oo soo booqata ma tirin karto macaamiil macquul ah. Xaaladaha intooda badan, shaqaalahaaga ama hay'adaha kale ayaa laga yaabaa inay la xiriiraan server si loo gaaro ujeedo gaar ah. Xaaladdan, waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad ka saarto booqashada shaqaalaha ee ka yimaada nidaamkaaga. Safarradaasi waxay u muuqdaan inay sameeyaan qaar ka mid ah isticmaalka bogga ugu culus. Kaafinta saxda ah ee shaqaalaha booqashooyinkaaga tirakoobkaagu waxay kobcin karaan saxnaanta natiijooyinka falanqaynta iyo sidoo kale keenaya sawir dhab ah oo ku saabsan nooca gaadiidka ee bogga soo jiidanaya - cheap bandwidth vps.
Andrew Dyhan, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu ku siinayaa qodobbada talooyin muhiim ah oo ku saabsan arrintan.
Macluumaadka la xariira cinwaanka IP
Marka booqdayaasha guji cinwaanka goobtaada, server wuxuu qeexayaa booqasho kasta oo leh cinwaan IP ah. Cinwaanka IP wuxuu u taagan yahay qaab kaas oo barta shabakadda ee u adeegsata server-ka la xidhiidha. Tusaale ahaan, cinwaanka IP ee casriga kombiyuutarka user, kiniin, desktop ama qalab kale. Xaaladaha kale, kumbuyuutarrada SEO ee Google ayaa sidoo kale ka dhigaya isticmaalka cinwaanada IP si loo shakhsiyadeeyo bartilmaameedkooda. Hackers waxay kaloo isticmaali karaan cinwaanada IP si ay u bartilmaameedsadaan nacaybkooda iyo fayraska.
Marka laga reebo cinwaanka IP
Waa muhiim in la helo cinwaanka IP-ga isticmaalka ka hor inta aan la bilaabin. Raadin sahlan oo Google ah "maxay tahay cinwaanka IP-ga" waxay Google ku siin kartaa cinwaankaaga IP. Cinwaanka IP-ga waa muujinta goobta juquraafi ahaaneed ee uu isticmaalo internetka. Si looga reebo cinwaanka IP-ga, waxaad gashaa guddi-hawleedkaaga Google Analytics. Ka soco sare ee bogga, riix badhanka fiilooyinka. Laga soo bilaabo halkan, waxaa suurtogal ah in lagu xereeyo magac, cinwaanka ama cinwaannada IP-ga ee ka yimaada gaadiidka hadda socda
Cinwaanka IP-da wuxuu mar walba u muuqdaa sida tirada 3 iyo 4 lambar oo kala-goosan ah. Keydso horumarka talaabo kasta. Haddii aad leedahay qaar ka mid ah goobaha kala duwan ee cinwaanka IP, kala saar goobaha xafiisyada adoo ku celinaya habka kor ku xusan. Waxaa suurtogal ah in lagu hubiyo joojinta cinwaanada IP-da ee Google Analytics. Qoraalka cusub ee falanqaynta cusub, waxaa suurtogal ah in la sameeyo filim caadifad ah oo laga reebo qaar ka mid ah laamaha aad doorato. Marka aad hagaajinayso goobahaas, waa muhiim inaad xasuusato inaad badbaadiso horumarka.
Marka laga reebo qaar ka mid ah calaamadaha IP-ga ee ka yimaada gaadiidkaagu waxay noqon karaan qiyaas muhiim ah oo diiradda saaraya dhegeystayaashaada. Ma aha oo keliya sawir muuqaal ah oo ku saabsan dib u soo celinta laakiin sidoo kale waxay dadka ka caawisaa helitaanka siyaabo kale oo lagu gaaro macaamiisha kale. Waa suurtagal in la gaaro geo-bartilmaameedka adoo isticmaalaya cinwaanka IP-ka. Xaaladaha kale, spammers waxay u muuqdaan in ay ku faafiyaan cinwaannada IP-yada. Kala soocida taraafiga shaqaalaha ee ka imaanaya booqdayaasha kale waxay ka caawin karaan shabakadda e-commerce inay ka fogaadaan fayrasyada